काठमाडौं–भक्तपुरमा गंगारामको यस्तो अनौठो बस, जहाँ माइकिङसँगै यात्रुलाई खाजाको सुविधा पनि ! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं–भक्तपुरमा गंगारामको यस्तो अनौठो बस, जहाँ माइकिङसँगै यात्रुलाई खाजाको सुविधा पनि !
भक्तपुर, चैत १८ । बा ४ ख २७२४ नम्बरका बसमा सहचालक छैन । सुन्दा तपाइलाई अचम्म लाग्ला तर, यो गाडी विगत १० महिनादेखि बिना सहचालक काठमाडौं–भक्तपुर रुटमा गुडिरहेको छ । भक्तपुर जिल्ला वडा नं. ७, गुलमढी चोर्चका गंगाराम खाइजु यस बसका चालक हुन् । उनले सन् २०५७ साल देखि गाडी चलाउन थालेका थिए ।
सहचालक राख्दा आम्दानी चुहाहट हुनुका साथै यात्रुको गाली पनि खानु परेपछि उनले यस्तो जुक्ति लगाएको हो । शुरुमा यो उपाय अपनाउन गाडीका मालिक मानेका थिएनन् । उनले मालिकलाई यो उपाय अपनाएर हेर्छु राम्रो भए ठिकै छ राम्रो भएन भने सहचालक राख्छु भनेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस काठमाडौ‌–भक्तपुर जोड्ने चार ठूला पुल निर्माण अलपत्र
पहिलो २ महिनासम्म त उनलाई गाह्रो भएको थियो । तर, पनि उनी हार नमानी निरन्तर लागि परेपछि अहिले सबैले तारिफ गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंको सार्वजनिक बसमा यस्तो दृश्य कमै देख्न सकिन्छ । यस बसको ढोका यात्रु चढ्ने र झर्ने बेला आफै खुल्ने र बन्द हुने गर्छ । साथै, यस बसमा चाउचाउ र पानी पनि किन्न पाइन्छ । यात्रुका बालबच्चालाई भोक–तिर्खा लाग्दा पसल धाउनुभन्दा बसमै राख्दा यात्रुलाई सहज हुने उनले बताए ।
सन्देशमुलक प्ले कार्डले भरिभराउ उनको यो बसमा ‘गाडीबाट निस्कने फोहोर–धूलोलाई जथाभावी नफालौं, प्रत्येक गाडीमा डस्टबिनको प्रयोग गरौं, व्यवसायी चालक सहचालकज्यूहरुलाई अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद’ ‘गाडीभाडा आफू चढेको ठाउँ भनेर चालकलाई दिनुहोला ।’ रु. एक हजार तथा रु. ५०० को रकम भए खुद्राको लागि पहिले नै चालकलाई भन्नुहोला ।’ र ‘फलफूल, कुरकुरे, लेज, बदाम तथा अन्य खाद्यवस्तुबाट बोक्रा, प्लाष्टिकजस्ता फोहोर वस्तु डष्टविनमा हाली आफूलाई सभ्य नागरिकको पहिचान दिऊ ।’ ‘पानी प्रति बोतल रु २० तथा चाउचाउ प्रति प्याकेट रु २० मा उपलब्ध छ ।’ जस्ता प्लेकार्डहरु टाँसेको देख्न सकिन्छ।